ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်: အချစ်ရေးကိစ္စ ဘာမှ မပြောတဲ့ ရဲတိုက်
အချစ်ရေးကိစ္စ ဘာမှ မပြောတဲ့ ရဲတိုက်
ရဲတိုက်ကို တချို့ကလည်း သရုပ်ဆောင် ကောင်းတယ်။ တချို့ ကလည်း မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အပေါ် မှာ ရဲတိုက်ကတော့ အမှန်တရား တစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားပါ သတဲ့။ အကယ်ဒမီပေးပွဲကို သူမ တက်ခဲ့တာကိုလည်း ပရိသတ်က သတိထားမိပြန်ပါတယ်။ တကယ် တော့ သူ နေမကောင်းလို့ပါတဲ့။ ခု ဆိုရင် သူက ထုတ်လုပ်ရေးအသစ် တစ်ခုနဲ့ စာချုပ် ချုပ်ပြီး ဇာတ်ကားများ ရိုက်ကူးလျက် ရှိပါတယ်။ MICT Park ထဲက ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင် ရိုက်ကွင်း တည်ထားတဲ့ ဧဒင်မြို့သူ များရိုက်ကွင်းမှာ ရဲတိုက်ကို မေးဖြစ် ခဲ့တာတွေက....Q. ရဲတိုက် ခုရိုက်နေတဲ့ ဇာတ် ကားနာမည်က
A. ဇာတ်ကားနာမည်က "ဧဒင် မြို့သူများ" ပါ။ အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော့် နာမည်က ရာဇူး ဆိုတဲ့ ကောင်လေး ဒါရိုက်တာက ကိုညိုမင်းလွင်ပါ။
Q. ရဲတိုက် “မမ မမ” တုန်းက လည်း အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်တွေ နဲ့ ရိုက်ခဲ့သေးတယ်နော်။ ဒီကားကရော ဘယ်လို ပုံစံမျိုးလဲ။
A. ကျွန်တော် “မမ မမ” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကို မမှတ်ထားဘူးဗျ။
Q. ဟိုတလောက ရဲတိုက်ကို သိပ်ဖမ်းရ ခက်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။
A. အတောင်ပံ ပေါက်သွားလို့ ဖြစ်မှာပေါ့။
Q. ကား Accident ဖြစ်တာ ရော။
A. အဲဒါက ကျွန်တော့် ပေါ့ဆ မှုတစ်ခုကြောင့် Accident ဖြစ် သွားတယ်။ အဲဒီလို တစ်ခါတလေ ဖြစ်ပေးမှလည်း ဘ၀က သိတာကိုး။ အကောင်းဘက်ကနေပဲ တွေးပါတယ်။
Q. ရှုတင် မန်နေဂျာက ရဲတိုက် ခုတလော လိမ္မာနေတယ်လို့ ပြောတယ်။ အရင်က လူဆိုးလေးလား။ ဘယ်သူက ဆုံးမလိုက်လို့လဲ။
A. မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က အမြဲ လိမ်မာပါတယ်။ ဘယ်သူမှလည်း မဆုံးမပါဘူး။
Q. အကယ်ဒမီ မမနဲ့ အချစ်ရေးဆိုတဲ့ သတင်းကရော နာမည် အတိအကျ ဘာကြောင့် မပြောတာလဲ။
A. ကျွန်တော် အဲဒီကိစ္စ ဘာမှ မပြောတော့ဘူးဗျ။
Q. ရဲတိုက်က စိတ်ဓာတ်ကျ လွယ်တဲ့သူလား။
Q. ခုထုတ်လုပ်ရေး အသစ်နဲ့ ဘာကြောင့် စာချုပ် ချုပ်ဖြစ်သွား တာလဲ။
A. တစ်ယောက် အဆင်ပြေအောင် တစ်ယောက်က လုပ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ပဲ စာချုပ် ချုပ်ဖြစ်သွား တာပါ။ အဓိက စေတနာဘယ် လောက်ရှိလဲ ကြည့်ပြီး လက်ခံဖြစ် တယ်။ အဓိကပေးတဲ့ ဇာတ်ကား လေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော့် ပေါ်မှာ ဘယ်လို သဘောထားလဲ။ ဒါတွေက အရေးကြီးပါတယ်။
Q. ရဲတိုက် သရုပ်ဆောင်တာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အပေါ်မှာရော ရဲတိုက် ဘယ်လို သဘော ထားလဲ။
A. မကြိုက်တဲ့သူက သေချာ ပေါက်ရှိမှာပဲ။ ဒါက အမှန်တရားပဲလေ။
Q. ၂၀၁၂ မှာ ရဲတိုက် ဘယ် အထိ ခရီး ရောက်ခဲ့လဲ။
A. ကျွန်တော် အဲဒါမျိုး မသိပါ ဘူး။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ Target ကို မရှိဘူး။
Q. ၂၀၁၃ မှာ ဘာတွေလုပ် မယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားထားတာမျိုး ရှိလား။
A. တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး လုပ်သွားမယ်။
Q. ရဲတိုက်ရဲ့ ပရိသတ်ကို ပြောချင်တာက...
A. ပရိသတ်ကြီးကို ကျွန်တော်က ချစ်ပါတယ်လို့။